Jessica Chastain amin'ny lahateny ho an'ny kintana 'It: toko faharoa' - iHorror
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Jessica Chastain amin'ny lahateny ho an'ny kintana 'It: toko faharoa'
Jessica Chastain amin'ny lahateny ho an'ny kintana 'It: toko faharoa'
by Kelly McNeely Febroary 20, 2018
Araka ny notaterin'ny Isan-karazany, indroa i Oscar Chastain, voatendry an'i Oscar, dia efa nifampiraharaha handray ny toerany ao amin'ny Andy Muschietti's Izany: Toko Faha-roa tahaka an'i Beverley Marsh efa lehibe.
Na dia amin'izao fotoana izao aza dia tsy misy vita sonia na apetraka amin'ny vato, io no mariky ny fanambarana voalohany (semi) voalohany ho an'ny kinova ho an'ny olon-dehibe an'ny Loser's Club. Ny loharanom-baovao isan-karazany dia manamarika fa “ny roa tonta dia nanomboka niady hevitra tamin'ny fomba ofisialy [Chastain] ho tonga amin'ilay tetikasa”.
Ny mety ho mpilalao sarimihetsika ho an'ny olon-dehibe dia lohahevitra mafana resadresaka nifanaovan'ny mpankafy mahatsiravina hatramin'ny fahombiazan'ny wild wild Itfamoahana voalohany.
Izahay notaterina teo aloha i Chastain dia nijery ny anjara asany ary toa nanohana an'ity hevitra ity ny mpankafy - misy afisy vita amin'ny mpankafy maro izay nanilika azy ho Bev. Raha dinihina ny zava-misy fa mpilalao sarimihetsika talenta efa niasa niaraka tamin'i Muschietti tamin'ny taona 2013 Mama - novokarin'i Guillermo Del Toro - misy dikany fa mpifaninana ambony izy.
Mama avy amin'ny Universal Pictures
Miverina hitantana i Muschietti Izany: Toko Faha-roa miaraka amin'ny mpanoratra Gary Dauberman. Rehefa ny kinova sarimihetsika an'ny It nohazavaina voalohany, ny boky dia namboarina tamin'ny script nataon'i David Kajganich. Cary Fukunaga (True Detective Ny vanim-potoana 1, na ny vanim-potoana fahitalavitra tokana tsara indrindra, miadia amiko) dia notendrena hitarika sy hanoratra indray an'i Chase Palmer. Rehefa lasa i Fukunaga ary nalain'i Muschietti ny tetikasa dia nentina nanampy hanoratra indray ilay script i Dauberman mba hifanaraka amin'ny fahitan'i Muschietti raha ilay horonantsary.
Ny script ho an'ny Izany: Toko Faha-roa dia mbola ao anaty sanganasa miaraka amina filming hanombohana tamin'ity fahavaratra ity.
Ato ihany koa, tsy manana vaovao vaovao fanaovan-tsonia amin'ny fomba ofisialy izahay (na dia azo antoka aza izany fa hahita ny fiverenan'i Bill izahay Skarsgård toy ny Pennywise). Noho izany, amin'izao fotoana izao, dia tokony hijanona ho tsy mino ny fisian'ny afisy hitanao ianao satria mety ho mpankafy.
Toy ny mahazatra, mandra-pahatongan'ny fanamafisana ny antsipiriany, raiso amin'ny masira sira ny zava-drehetra.
Azo antoka fa vita fan
Raha lazaina izany, rehefa tonga ny vaovao, dia ho hitanay fa hitazona anao hatrany izahay! Izany: Toko Faha-roa dia efa navotsotra tamin'ny 6 septambra 2019.
Andy MuschiettiITIzany: Toko Faha-roaJessica Chastain
Kelly McNeely dia misotro dite, manao asa-tanana, manao junkie takelaka antsy an-tsokosoko miaraka amin'ny fientanentanana mahasalama indrindra amin'ny horonantsary, sary mihetsika 90, ary haingon-trano mahatsiravina. Azonao atao ny mahita azy manamboatra tokatrano fety ao amin'ny The Creepy Crafter ao amin'ny Facebook, na manaraka azy ao amin'ny Twitter sy Instagram @kellsmcnells
'Trano Fahafatesana' natosika hiverina noho ny zava-nitranga 'Black Panther'
Ity andro ity amin'ny tantara mahatsiravina: 20 feb